सुधारको संकेत, कोरियामा लगातार २ दिनदेखि दैनिक संक्रमित घट्दो, हेरौं आज कति थपिए? – Eps Sathi
सुधारको संकेत, कोरियामा लगातार २ दिनदेखि दैनिक संक्रमित घट्दो, हेरौं आज कति थपिए?
December 21, 2021 344
दक्षिण कोरियामा दैनिक कोरो’ना सं’क्रमितहरुको संख्यामा केहि सुधार देखिएको छ। मंगलबार यहाँ लगातार दोश्रो दिनका रुपमा ६ हजारभन्दा तल सं’क्रमित थपिएका छन। दैनिक सं’क्रमितहरुको संख्या घटेता पनि को’भिडका सि’किस्त बि’रा’मीहरुको संख्या भने पुन एकपटक १ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।
कोरियामा मंगलबार थप ५ हजार २ सय २ जनामा सं’क्रम’ण पुष्टि भएको छ जसमध्ये ५ हजार १ सय ४४ जना कोरिया भित्रकै स्थानिय सं’क्रमित हुन भने बाँकी विदेशबाट आएकाहरुमा देखिएको सं’क्रम’ण हो। मंगलबार थपिएकाहरुको संख्या समेत जोड्दो कोरियामा कुल सं’क्रमितहरुको संख्या ५ लाख ७५ हजार ६ सय १५ पुगेको छ।
कोरिया रो’ग नि’यन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सीका अनुसार मंगलबार यहाँ को’रोनाका सि’किस्त बि’रा’मीहरुको संख्या १ हजार २२ जना पुगेको छ जुन संख्या शनिवार १ हजार १६ जना, आइतबार अहिले सम्मकै उच्च १ हजार २५ जना तथा सोमबार ९ सय ९७ जना रहेको थियो।
कोरियामा आ’इसियु बेडको ‍औषत उपलब्धता सोमबार साँझ ५ बजेसम्म ८०.७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। तर सउल र त्यसवरपरको क्षेत्रको यस्तो रेट ८७.७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि अवस्था बि’ग्रिएको भन्ने बुझिन्छ। मंगलबार मध्यरातको तथ्याङ्कअनुसार सउल क्षेत्रमा ४ सय २० जना को’भिडका बि’रा’मी अ’स्पताल भर्नाको पर्खाइमा रहेका छन जसको घरमै उपचार भइरहेको छ।
त्यसैगरी मंगलबार कोरियामा थप ४९ जना ओमिक्रोन भेरियन्टका सं’क्रमित थपिएका छन। यो सँगै कोरियामा ‌ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि हुनेहरुको कुल संख्या २ सय २७ पुगिसकेको छ। को’रोना फै’लि’एसँगै दक्षिण कोरियाली सरकारले शनिवारबाट देशभर सामाजिक दूरीका नि’यममा क’डाई गरेको थियो। कोरियामा आउँदो जनवरी २ तारिखसम्म यस्तो क’डाई गरिने बताइएको छ।
Prevदक्षिण अमेरीकी देश चीलीमा ३५ बर्षिय युवा राष्ट्रपतिमा विजयी
Nextजापानमा मंगलबार ३ जनालाई दिइयो मृ’त्युद’ण्ड, कारण थाहा पाउनुस
एस्ट्राजेनेका कम्पनीको खोपलाई कोरियाले दियो प्रयोग अनुमति
कोरिया पनि खोप बनाउने दौडमा, कहिलेसम्म आउला कोरियन खोप?
कोरियाबाट फर्केर १० रुपैयाँमै कपडा बेच्ने चिजमानको व्यवसाय, हेरौं कसरी हुँदैछन सफल
सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश